Maalgashi raqiis ah oo maqal ah wuxuu kordhin doonaa kaqeybgalka muuqaalka | Martech Zone
Maalgashi raqiis ah oo maqal ah wuxuu kordhin doonaa kaqeybgalka fiidiyowga
Isniintii, September 8, 2014 Khamiista, Febraayo 25, 2021 Douglas Karr
Mid ka mid ah sababaha aan u bilownay taxanahan fiidiyowga ayaa ah inaan muujino sida ay u fududahay duubista iyo daabacaadda fiidiyowyada si ay kaaga caawiyaan istiraatiijiyaddaada guud ee suuq-geynta. Fur Mac ama PC kasta oo casri ah maanta oo ay jiraan kamarad ku dhex jirta iyo makarafoon diyaar u ah inay duubaan fiidiyowgaaga xiga ee 1-daqiiqo ah. Hubi barnaamijka duubista gudaha oo waad tagaysaa! Waxaa jira hal dhibaato oo yar, in kastoo.
Mikarafoonada gudaha ka yimaadaa gabi ahaanba waa kuwo cabsi badan. Ma ogtahay in dadku joojin doonaan daawashada fiidiyow weyn oo leh cod cabsi leh…. oo aad daawan kartaa fiidiyow leh fiidiyow tayo xun laakiin maqal wanaagsan? Codka ayaa fure u ah hawlgelinta fiidiyowga. Mana aha inaad ku sameyso maalgashi ballaaran qalabka qalabka maqalka. Waxaan rabay inaan ku cadeeyo anigoo duubaya fiidiyaha soo socda.
Waxaan soo iibsanay a makarafoonka lavalier raqiiska ah ee AmazonCost waxay ku kacday $ 60 oo lagu daray rar iyo maarayn. Waxaad ka maqli doontaa xoogaa dildilaac ah oo ka soo baxa waana wax yar, laakiin marka la barbardhigo makarafoonka gudaha ee muuqaalka $ 1,000 Apple Thunderbolt, gabi ahaanba waa habeen iyo maalin. Hubso inaad daawato fiidiyowga oo dhan si aad u maqashid farqiga u dhexeeya.
Makarafoonka lagu bilaabo bilowga weyn waa Audio-Technica AT2005USB Cardioid Dynamic USB / XLR Microphone waxayna ka hooseysaa $ 100. Waxaan u adeegsanaa cinjirka, duubista fiidiyowga iyo xitaa wicitaannada Skype. Waa la qaadi karo oo sahlan in lagaa qaado wadada.
Haddii aad runtii rabto inaad dhammaantiis baxdo, waad iibsan kartaa dhowr ka mid ah Sennheiser EW122PG3-A Camera Mount Mountless Qalabka Lavalier Microphone Systems iyo a Soo dhawow PodTrak P4 Podcast Record. Faa’iido darrada kaliya ee jirta ayaa ah haddii aadan ku dhejin karin makarafoonka lavalier-ka kamaraddaada, waxaad u baahan doontaa inaad adeegsato qalabka wax lagu duubo ee loo yaqaan 'Zoom recorder' ka dibna ku dheji codka iyo fiidiyowga mar dambe barnaamijkaaga fiidiyowga ah ee fiidiyowga ah. Taasi waxay ka soo baxaysaa aagagga fudud, in kastoo, taas oo ka soo horjeedda taxanahan.
Afeef: Waxaan u adeegsanayaa xiriiriyeyaasheyda ku xiran dhamaan qodobkaan Amazon.
Tags: codgeeyeaudioqiimo jaban Lavaliermakarafoonka lavalierduubista codkafuulay lavalierfuulay makarafoonka lavalierfuulay micdhajiye duubista dijitaalka ah
Sida loo Kordhiyo Fursadda E-maylkaaga ee aad ku timaaddo Sanduuqa